İsa ApaydınMagaalada iyo Saldhigga "| RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankaraİsa ApaydınKalem City iyo Station Kalem
05 / 07 / 2017 06 Ankara, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, HAY'ADAHA, TURKEY, TCDD
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın"City iyo Station ayaa lagu daabacay jariidada July ee majaladda Raillife
Xaaladda degdega ah, saldhigyada weli taagan oo maanta taagan iyo kuwa aan ka mid ahayn magaalooyinka ay marayaan tareenka tareenka
Tan iyo sannadkii 1856, jidadka tareenada iyo saldhigyada ayaa loo dhisay siinta, adeegga shirarka iyo tareenada tareenada, oo ay weheliyaan qalabka ku hareereysan ee ku hareereysan Anadolu. Iyada oo ku saleysan saldhigyada iyo saldhigyadan, ilbaxnimada cusub ee magaaladu waxay bilowday inay sameyso.
Maadaama inta badan gaadiidka xamuulka iyo gawaarida waxaa fuliyay tareen, labadaba mudaharaadkii Ottomanka iyo kontonkii sano ee ugu horreeyay ee Jamhuuriyaddii, jihada noloshu had iyo jeer waxay ku socotay saldhigyada.
Magaalooyinka waxaa lagu dhisay xarumo ku yaala saldhigyada
Xaafadaha saldhigga, goobaha istayshinka iyo jardiinooyinka shaaha, waddooyinka boosteejada ...
Degmooyinka ugu quruxda badan ee magaalooyinka waa xaafadaha xarumaha, inta badan waxay ka kooban yihiin guryaha beeraha.
Qalabka dayuuradaha ee lagu dhisay beeraha, kuwaas oo lagu qurxiyo ubaxyo midab leh oo ay ka buuxaan kumanaan geed, ayaa ah meelaha ay ka mid yihiin meelaha ay degan yihiin.
Magaalooyinka ugu quruxda badan iyo kuwa ugu ballaaran ee magaalada ayaa lagu aasaasay wajiyada dhamaanba saldhigyada magaalada.
Jardiinooyinka shaaha ee goobahaas ayaa ah goobta shirarka ee magaalada oo dhan ka baxsan oo ah meel ay tareenadu raacaan wakhtigooda.
Habka ugu gaaban ee xarumaha magaalada waa waddooyinka boosteejada ...
Waa meesha ugu caansan magaalada oo ay la socoto jidadkeeda oo lagu qurxiyo geedo iyo goobaha shaqada ee labada dhinacba.
Sida ku jirta Polatli Malikoy, waxaan leenahay xarumo dhowr ah oo door weyn ka ciyaaray isbedelka koorsada Qaranka.
Saldhigyadeennii, kuwaas oo ka tagay raadinta qoto dheer ee taariikhdeena iyo goobaha laga bilaabo magaca saldhigga, weligoodba waxay sii joogi doonaan meelahooda quluubta dadka.
Sida TCDD, iyada oo la dhisayo xarumo tareen oo aad u sarreeya si ay ugu adeegaan xawaaraha sare ee tareenka, waxaan sidoo kale ka taxadarnaa xarumaheenna taariikhiga ah iyo saldhigyada iyada oo masuuliyadi ka saaran tahay in ay noqoto urur muddo dheer joogta oo 160 ah.
Calaamad su'aal ka timid qalin-jabkii Oya Arapoglu ee xawaaraha tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul
Madaxwaynaha TAYF Apaydin ayaa lagu xukumay ficil
Mid ka mid ah darawallada Tekkeköylü, Fevzi Apaydın: naga daryeel
Maamulaha Guud ee TCDD Apaydın wuxuu tijaabinayaa Ankara YHT Station Building
YOLDER madaxda ayaa booqday Apaydin iyo Yildirim
Maareeyaha Guud ee TCDD Apaydin Ankara Baaritaan Samas YHT
Wasiirka Arimaha Gudaha: Waddada Cusub ee Cusub ee Jidadka Tareenka ayaa bilaabay Bakan
Xawaaladda cusub ee 2020 ee Baarka Xawaaraha Sare